Intlungu kunye neendaba zosasazo | Martech Zone
NgoMvulo, nge-17 kaDisemba ngo-2012 NgoMvulo, nge-17 kaDisemba ngo-2012 Douglas Karr
Uninzi lwenu alundazi ngokobuqu, kodwa ndikhuliswe eNewtown, eConnecticut. Yidolophu encinci emangalisayo ekhule ngokumangalisayo kodwa ayitshintshanga kakhulu okoko bendihlala apho. Xa ndandisemncinci, sasidla ngokubona iimuvi e-City Hall, sityelele i-Blue Colony Diner for ice cream, kwaye siye eSt.Rose yaseLima Church ngeCawe. Uluntu lwaluzimele… uTata wam wayekwisebe lomlilo lamavolontiya xa sasihlala apho. Abantu abakhulu, uluntu olumangalisayo.
Omnye wabahlobo bosapho lwethu unonyana unyana wakhe osindisiweyo kule ntlekele- sonke siyabathandazela kunye neentsapho ezilahlekelwe kakhulu kwesi siganeko soyikekayo.
Xa into enje isenzeka kwaye ibandakanya impikiswano kunye nezopolitiko ezinje ngemipu, kukho umngcipheko wokwenyani obandakanyekayo ekuxoxeni okanye ekongezeni uluvo lwakho kwi-Intanethi. Iimpikiswano zinokuvela ngokukhawuleza zide zibe nentiyo xa umntu eveza izimvo zabo zezopolitiko njengoko amaxhoba ale nto engekabekwa.
Ndifuna ukulahla ezinye iingcebiso endicinga ukuba zibalulekile kwiinkampani nakubantu:
Ukuthula inokuba yimpendulo efanelekileyo. Umhlobo olungile UChuck Gose wabonisa ukuba I-NRA ivale iphepha labo le-Facebook kwaye bayeka ukuvuselela iakhawunti yabo ye-Twitter. Andikholelwa ukuba kukho impendulo engcono kunaleyo inikwe le meko. Iinkampani ezininzi kakhulu zicinga ukuba ngumsebenzi we-PR ukubeka ingxelo. Andivumi. Ngamanye amaxesha eyona nto unokuyenza kukuthula.
Ukwabelana ngeyakho uluvo iya kukuvula ukuba uhlasele. Icacile kwaye ilula, ukuzibeka kwelinye icala lempikiswano okanye enye kuya kubangela impendulo. Ukuba unoluvo olomeleleyo ngandlela thile kwaye uyabhengeza- ungothusi ukuhlaselwa esidlangalaleni, ukugculelwa, ukugwintwa okanye ezinye izimvo ezithandekayo eziphoselwe emva. Ukwabelana ngezimvo zakho kufuna ukukhula. Ukuba awukakhuli ngokwaneleyo ukuba ungaphendula impendulo, sukuzivulela ngokwakho kuhlaselo.
ingxoxo inokuba nemveliso. Imidiya yokuncokola ibonelela ngeendlela zokungavumelani nabantu ngelixa bobabini bekhathalele ngesiphumo. Ndizibonile iingxoxo ezintle malunga nolungiso lwesibini, ukugula ngengqondo, amabali obuqhawe, kunye nemiyalezo yothando kunye nenkxaso kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
ilinde lelinye iqhinga. Ngelixa iimpendulo zentlalo zihlala zibhetele xa kukho impendulo ekhawulezileyo, imicimbi yezopolitiko enje ngale inokubiza isicwangciso esahlukileyo. Ndiyekile ukuTwitter kwaye ndinciphisa ukubandakanyeka kwam kuFacebook. Ndilinde nokuthumela oku iintsuku ezimbalwa ukuze ndibenento eyakhayo endinokuyithetha kunokuba ndongeze kuqhushumbo lwezimvo, iingxoxo kunye neengxoxo-mpikiswano phaya. Ukuba unokulinda abantu bade bapholise kancinci, incoko inokuba yeyakhayo.
Imidiya yokuncokola yi medium. Awuthethi nje ngokuthe ngqo komnye umntu. Yindlela yonxibelelwano apho umyalezo wakho ubekwa eluntwini ukuze uphononongwe, nokuba uwuthumela phi. Eli thuba libonelela ngomnatha wokhuseleko kwabo banqwenela ukwenza okuhle, kunye nekhaka lokuzimela ngasemva kwabo banqwenela ukwenza okubi.
Xa ukuqhuma kwekhaya kwenzeka apha e-Indianapolis, thina wabona konke okuhle ukuba imithombo yeendaba zentlalo inokuvusa. Inike inkxaso, iindaba, ukholo, imiyalezo yethemba kwaye ikhokelela kuncedo lokwenyani kwabo babandakanyekayo.
Ndinethemba, ngaphandle kwengxoxo yezopolitiko, ukuba amajelo eendaba ezentlalo ekugqibeleni aya kuba yinto elungileyo ekuphiliseni abahlali. Sele ndibukele njengokuba abahlobo bam eNewtown basebenzise uFacebook ukwaba iimvakalelo zabo, ukuphelelwa lithemba, ithemba kunye nolonwabo lokuba unyana wabo uyaphila. Ngelixa singenako ukuzikhupha kwi-crazies, ngethemba lokuba singafunda ukusebenzisa indlela elungileyo ngokulungileyo. Okanye funda xa ungayisebenzisi kwaphela.
tags: newtownintlekele yemidiya yoluntu
Dec 17, 2012 ngo-9:23 PM
Izimvo ezintle Doug! Ndikhumbula ndisazi ukuba wakhulela Connecticut kodwa ngokupheleleyo akazange aqonde ukuba Newtown. Enkosi ngokwabelana ngale mibono nabafundi bakho kunye noluntu ngokubanzi.
Dec 17, 2012 ngo-10:06 PM
Enkosi @bnpositive:disqus. Andizange ndicinge ukuba umntu unokuze eve ngeNewtown, CT. Ayiqhelekanga ukuyibukela iqhubeka ezindabeni kwaye ndibone abahlobo bosapho lwam bethetha ngayo njengoko isenzeka.
Dec 17, 2012 ngo-11:01 PM
Omnye umngcipheko wokuntywila kwingxoxo yeMedia yeNtlalo ngamabali eendaba abuhlungu kukuba avela njengokuxhaphaza - njengaxa iintatheli zityhala imakrofoni ebusweni bomntu osanda kuphulukana nesithandwa sakhe. Ukuthula kudla ngokufanelekileyo.
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2012 ngo-12: 57 AM
Singakwazi ukusekwe ngamahlokondiba ngemidiya yoluntu. Kangangeeyure ezimbalwa ngolo suku sasicinga ukuba ngulo mzalwana. Khawufane ucinge ukuba abakhweli ebhasini awayethetha ngayo ngokungxama babeza kufunda iitweets – kwaye ukuba umdubuli wayesaphila. Inokuba kubi kakhulu.
Kwaye uRichard Engel. Ndiyasibona isizathu sokuba i-NBC ifake i-media blackout kuye de akhululwe. Ukuba iye yavuza ngokukhawuleza ngubani owaziyo ukuba kwenzeke ntoni kuye.
Abantu beMedia yeNtlalo baqala ukudubula nayiphi na into encinci yebali abayivayo kwaye ii-arhente zeendaba ziqala ukutsiba amanyathelo okugcina kunye nokugcina isantya sabo, ukutshintshela kumajelo asekelwe kuxolelo ngokungathi yi-arhente yentengiso ye-guerrilla ukuze bahlale befanelekile kubaxhasi babo. Ithambeka elimtyibilizi.
Okubaluleke ngakumbi - ndiyavuya ukuba abahlobo bakho kunye nosapho lwakho basinde kwivili le-roulette yaseRussia #Newtown ngoLwesihlanu. Ayenzi imeko ibe buhlungu ngakumbi kwaye ayiyonto ininzi icephe leswekile ukunceda iyeza ukuba lihle kodwa ubuncinci i-y'all ingabalisa ibali labo kwaye ihloniphe abo bangama-27 (kuthatha i-28 bebonke bafile - 1 ogama lakhe liyakuthi ungaze uphinde uthethe).
Kwaye ukwazi wena, bromance, uya kubahlonipha ngesitayile.
Ndazise into endinokuyenza ukunceda, ngakumbi ukuba inokuba ngaphezulu kunoTwitter noFacebook!
Ngomhla wama-20 ku-Disemba 2012 ngo-6: 46 AM
Le bhlog ifundisa kakhulu kwaye ndifumene ulwazi oluninzi kule bhlog. Nceda uqhubeke uyithumela.